Internet Download Manager ကို Full Version ဖြစ်အောင် Install လုပ်နည်းနေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Registry ထဲမှာရှင်းပြီးပြီဆိုရင် My Computer >> Local Disk ( C : )
>> Program File ထဲမှာ Internet Download Manager ဆိုတဲ့ Folder ရှိမရှိရှာလိုက်ပါ.. တကယ်လို့ တွေ့တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကောင်လေးကို Delete လုပ်ပေးလိုက်ပါ.. တကယ်လို့ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ Delete လုပ်ပေးစရာမလို တော့ပါဘူး.. ကျွန်တော် တို့အပေါ်က အဆင့်တွေတိုင်း ရှင်းပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Internet Download Manager ကိုစပြီး Install လုပ်လို့ ရပါပြီ..အောက်မှာ ကျွန်တော် Install လုပ်နည်းကို ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်..
ဒီပို့စ်လေးကို PDF ဖြင့်လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာဒေါင်းလော့ချသွားလိုက်ပါ..။
Download Ifile.it Download Ziddu အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ကျေးဇူး တင်တယ် အကို ... ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှင်းပြ ပေးတဲ့ အတွက်....
အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကိုရေ...ကိုယ်မသိတာတွေကိုသေချာရှင်းပြပေးတဲ့ အတွက့် အရမ်းလေးစားမိပါတယ်။
thankalost for sharing
တကယ်လေးစားပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီထက်ကိုပိုပြောချင်သေးတယ် မပြောတတ်လို့ ပါ
ကျေးဇူးအများကြီးပါတယ် ရှင် ......နောက်များမှာလည်း အများကြီး အကျိုးပြုနိုင်ပါစေ
ွှ့Thanks you so much
အစ်ကို နေမင်းမောင်ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် IDM ကို အခုမှပဲအဆင်ပြေတော့တယ် ဗျာ... အချိန်ကုန်ခံ လူပင်ပန်းခံပြီး ကျတော်တို့ လို နားမလည်တဲ့ သူတွေ နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးတာ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်......အခုလို ဆော့ဝဲတွေ ကို မျှဝေပေးတဲ့ အတွက်လည်း ထပ်လောင်း ကျေးဇူးတင်ပါရစေ........ဗျာ....
အခုလိုအပင်ပန်းခံ အချိန်ကုန်ခံပြီး ပုံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ကျေးဇူးအများကြီးပါတယ် ......နောက်များမှာလည်း အများကြီး အကျိုးပြုနိုင်ပါစေ
fully worked. thank you so much...
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ယခုလိုနည်းပညာများကိုမျှဝေပေးတာ။အကိုရဲ့ နည်းပညာများကိုလည်းကျနော် ထပ်ဆင့်မျှဝေပေးပါ့မယ် မသိသေးသူများ သိလာအောင်။ကျနော်ဆိုက်ဒ်မှာ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပြီနော်။ (www.myittarshin.com).Happy New Year.MTS
Path ဖိုင် ဘယ်လိုဖွင့်၇မလဲညီေ၇..လုပ်လို့ မ၇ဘူးဖြစ်နေတယ်..ကီးတောင်းတဲ့နေ၇ာထိတော့၇တယ်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒီထက်မက ပညာတွေတိုးတက်ပါစေ။
ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျာ ခုလိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်သင်ပေးလို...ကျောင်းဆရာလုပ်စားရမှာဗျ အကိုရ
Internet Download Manager Folder ကို Delete လုပ်တာလုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုနေမင်ြးုဖစ်နိုင်ရင် ဘယ်လို Delete လုပ်ရမလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါလား
အားလုံး ကအစဉ်ပြေသွားကြပေမဲ့ ကျွန်တော်တယောက်ပဲဒုခရောက်နေတယ် ........ကိုနေမင်း.......Internet Download Manager ကိုလုပ်နေတာ၁၅ရက်တောင်ရှိသွားပြီဗျာဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူး............အရင်ဖွင့်ထားတဲ့ ရက်၃၀ ပဲသုံးလို့ရတာပဲပြန်ေ၇ာက်နေတယ်ုပြီးတော့ ကျွန်တော့ စက်ထဲမှာ Patch File ကိုရှာလို့ မရဘူး ကူညီပါအုံးဗျာ
အစ်ကိုရေ...IDM ကိုစက်ထဲမှာ အစအနမကျန်အောင် ရှင်းလို့မရဖြစ်နေလို့ပါ..အကိုပြောတဲ့အတိုင်း..အပေါ်က အဆင့်တွေတော့ လုပ်လို့ရပါတယ်..ဒါပေမယ့်..My Computer >> Local Disk ( C : ) >> Program File ထဲမှာ Internet Download Manager ဆိုတဲ့ Folder ကို delete လုပ်တာ အကုန်မပျက်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ကျန်နေတယ် ဘယ်လိုမှကိုဖျက်လို့မရတော့လို့ ကူညီပါဦး....
အကိုရေ ဒီPostကို PDF file ဒေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်လင့်(ခ်) ၃ခုလုံးမှာ ဖိုင်တွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောနေတယ်အကိုဖြစ်နိင်ရင်ပြန်တင်ပေးပါလားဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
အကို ကျနော့် ကွန်ပျူတာမှာ patch ဖိုင်ကို virus အဖြစ်ဖျက်ဖျက် နေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
many thank brother for your ..............
အကိုရေ...keygen ..patch ကမရှိဘူ:ဗျ...ပြီ:တော့ အကိုပေ:ထာ:တဲ့လင့်၃ ခုကသေနေပြီ...တခြာ:တော့လုပ်လို့ ရတယ် အဲနှစ်ခု ဘဲ ခက်နေတာ...search နဲ့ ရှာလဲ မရှိဘူ:..ကူပါဦ:
link သေနေတယ် ပြန်တင်ပေးပါအုံး
ကျေးဇူးဘဲကိုနေမင်းရေ ခါတိုင်းဆို update မလုပ်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်။ခုတော့အားလုံးအိုကေသွားပြီ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ။လေးစားပါတယ်။အများအတွက်အချိန်ပေးတဲ့အတွက် အစ်ကိုလဲ အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေ။လိုအင်ဆန္ဒတွေလဲပြည့်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်နော်။
ကျွန်တော်လို ငတုံးကို ၇အောင်သင်ပေးခဲ့တဲ့ အတွက်အ၇မ်းကို ကျေးဇူးပါ
အကိုေ၇ ဆွဲလို့ မရဘူးဗျာ...........လင့်အသစ်လေးရှိရင်မျှပါဦး.........ကျွန်တော် အ၇မ်းလို ချင်လို့ ပါ.........
Patch file လေး ဝေမျှပါ။
အခြားdownload manager ၇ှိသေးလား
thanks...brother. Your are really great.
အကိုရေ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်နော် ကျွန်တော်လည်းဒါနဲ့ဘဲရွာလည်နေတာဗျ အကိုရှင်းပြမှဘဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်ဗျာ...အချိန်ကုန်ခံပြီးရှင်းပြတဲ့အကိုတယောက်ကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်လည်းဒီထက်မကရှင်းပြနိုင်ပါစေဗျာ .. မသိတဲ့သူများသိသွားရအောင်လို့ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ထဲမှာ ကူးယူဖော်ပြချင်လို့ပါ ခွင့်ပြုပါနော်
Thanks for your details.Keep going,my brother.We're proud of you.
VS G.o.W. Redux Themes Pack For Windows 7
Spy Camera များအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
DigitalAnarchy Beauty Box 1.2.2 Plugin for Adobe P...
The Works 3.2 Plugins For Adobe Photoshop
uTorrent Turbo Accelerator 2.1.0 + Portable
Processor Name ကိုချိန်းရအောင်ဗျာ။
Stop Software Installation Tool 3.1
USB Disk Security Latest 6.0.0.126 Version Full
Pearl Mountain Greeting Card Builder 3.0.2 build 2...
Odin Frame Photo Creator 6.6.1-SER
ဘလော့စပေါ့ကို Update ပေးပြီးသုံးကြည့်ရအောင်
n-Track Studio 6.1.2 Build 2827
Magnificent Cityscapes HD Wallpapers
Win7codecs 3.0.4 Final Multilanguage
Universal Document Converter 5.2 + Crack
BatchPhoto Pro v2.7 + Crack
Recover Lost WEP Wireless Network Password Key
Adobe Premiere Pro CS5.5 + Keygen